यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्नुहोस्! | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमिस अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्होबो एङ्गोलन साङ्केतिक भाषा एडो एफिक एस्टोनियन ओक्पे ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कन्नडा काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुर्दीस कुर्मान्जी कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केन्यन साङ्केतिक भाषा कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती गून ग्रीक ग्रीक साङ्केतिक भाषा चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चुभास चेक चेक साङ्केतिक भाषा चोल जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जिम्बावे साङ्केतिक भाषा जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डिगोर डुआला डेनिश ताजिकी तामिल तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाइजेरियन पिजिन नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पिजिन (क्यामरून) पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज पोर्चुगिज साङ्केतिक भाषा पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बंगाली बाश्कीर बासा (क्यामरून) बिकोल बुल्गेरियन बोउलो बोलिभियन साङ्केतिक भाषा ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मबुन्डा मराठी मलावी साङ्केतिक भाषा मले मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मिङ्रेलियन मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मोटु म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानियन साङ्केतिक भाषा लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभाक साङ्केतिक भाषा स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
“हे यहोवा हाम्रा परमेश्वर, तपाईं महिमा, आदर अनि शक्ति ग्रहण गर्न योग्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईंले नै सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो।”—प्रका. ४:११.
गीत: ११२, १३३
सारा ब्रह्माण्डमा शासन गर्न किन यहोवा मात्र योग्य हुनुहुन्छ?
किन यहोवाको शासन नै सबैभन्दा उत्तम शासन हो?
अहिले हामी कसरी यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्न सक्छौं?
१, २. हामी सबै कुन कुरामा ढुक्क हुनुपर्छ? (शीर्षकमाथिको चित्र हेर्नुहोस्)
यहोवा असल शासक हुनुहुन्न अनि मानिस आफैले शासन गर्दा तिनीहरू अझ आनन्दित हुन सक्छन्‌ भनेर सैतानले दाबी गरेको कुरा अघिल्लो लेखमा थाह पायौं। के सैतानले भनेको कुरा सही हो? मानौं, मानिसहरू आफैले शासन गरे अनि तिनीहरू सधैंभरि बाँच्न पनि सक्छन्‌। तर के परमेश्वरको शासनविना तिनीहरू अझ आनन्दित हुन सक्लान्‌? मानौं, तपाईं परमेश्वरबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ अनि सधैंभरि बाँच्न सक्नुहुन्छ। तर के तपाईं आनन्दित हुनुहुनेछ?
२ कसैले पनि तपाईंको लागि यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्दैन। प्रत्येक व्यक्ति आफैले यी प्रश्नहरू राम्ररी विचार गर्नुपर्छ। यसरी विचार गऱ्यौं भने यहोवाको शासन नै सबैभन्दा उत्तम शासन हो अनि तनमनले उहाँको शासनलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्छौं। यहोवा मात्र शासन गर्न योग्य हुनुहुन्छ भनेर विश्वस्त बनाउने के-कस्ता आधार बाइबलमा छन्‌, विचार गरौं।
यहोवासित शासन गर्ने अधिकार छ
३. यहोवासित मात्र सारा ब्रह्माण्डमा शासन गर्ने पूरा अधिकार छ, किन?
३ यहोवासित सारा ब्रह्माण्डमा शासन गर्ने अधिकार छ। किनभने उहाँ मात्र ब्रह्माण्डको सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अनि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। (१ इति. २९:११; प्रेषि. ४:२४) एउटा दर्शनमा ख्रीष्टका १,४४,००० सह-शासकले यसो भने: “हे यहोवा हाम्रा परमेश्वर, तपाईं महिमा, आदर अनि शक्ति ग्रहण गर्न योग्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईंले नै सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो र तपाईंकै इच्छाबमोजिम ती अस्तित्वमा आए अनि सृजिए।” (प्रका. ४:११) यहोवाले नै सबै थोक सृष्टि गर्नुभएकोले उहाँसित मानिस र स्वर्गदूतहरू सबैमाथि शासन गर्ने पूरा अधिकार छ।
४. यहोवाको सार्वभौमिकताको विद्रोह गर्नु भनेको छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्नु हो, किन?
४ सैतानले सृष्टि गरेको कुरा केही पनि छैन। त्यसैले त्यससित ब्रह्माण्डमा शासन गर्ने कुनै अधिकार छैन। यहोवाको सार्वभौमिकताको विद्रोह गर्दै सैतान अनि प्रथम मानव दम्पतीले घमन्डी मनोभाव देखाए। (यर्मि. १०:२३) तिनीहरू छनौट गर्ने स्वतन्त्रतासहित सृष्टि गरिएका थिए। त्यसैले तिनीहरूले यहोवाको शासनको अधीनमा नबस्ने छनौट गर्न सक्थे। तर के यसको अर्थ तिनीहरूसित त्यसो गर्ने अधिकार थियो? अहँ, थिएन। छनौट गर्ने स्वतन्त्रता भएकोले मानिसहरू दिनहुँ विभिन्न छनौट गर्न सक्छन्‌। तर त्यसो भन्दैमा तिनीहरूसित आफ्नो सृष्टिकर्ता अनि जीवनदाताको विद्रोह गर्ने कुनै अधिकार छैन। यहोवाको विरोध गर्नु भनेको छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्नु हो। हामीलाई यहोवाको शासन अनि निर्देशन आवश्यक छ।
५. यहोवाको निर्णय सधैं सही हुन्छ भनेर किन भन्न सक्छौं?
५ यहोवा मात्र शासन गर्न योग्य हुनुहुन्छ भन्न सक्नुको अर्को आधार पनि छ। उहाँ आफ्नो शक्ति सधैं सही तरिकामा प्रयोग गर्नुहुन्छ। बाइबलमा “उहाँनै परमप्रभु हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीमा दया, इन्साफ र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ। किनभने यिनै कुरामा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ” भनेर लेखिएको छ। (यर्मि. ९:२४) सही न्याय गर्नको लागि उहाँलाई त्रुटिपूर्ण मानिसहरूले बनाएको नियम-कानुन आवश्यक छैन। सही र गलतको स्तर उहाँ आफै तोक्नुहुन्छ। त्यसैको आधारमा उहाँले मानिसहरूलाई लिखित निर्देशनहरू दिनुभयो। यहोवाबारे बाइबल यसो भन्छ: “धार्मिकता र इन्साफ तपाईंको सिंहासनका जग हुन्‌।” (भज. ८९:१४; ११९:१२८) त्यसैले उहाँले दिनुभएको सबै नियम, सिद्धान्त अनि उहाँले गर्नुहुने निर्णय सधैं सही हुन्छन्‌ भनेर हामी विश्वस्त हुन सक्छौं। सैतानले यहोवा अन्यायी शासक हुनुहुन्छ भनेर आरोप त लगायो तर त्यो आफैले भने संसारलाई अन्याय मुक्त बनाउन सकेको छैन।
६. यहोवा मात्र शासन गर्न योग्य हुनुको एउटा कारण के हो?
६ यहोवासित यस ब्रह्माण्डमा शासन गर्न चाहिने ज्ञान अनि बुद्धि छ। त्यसकारणले गर्दा पनि उहाँ शासन गर्न योग्य हुनुहुन्छ भन्न सक्छौं। उदाहरणको लागि, यहोवाले आफ्नो छोरालाई रोगहरू निको पार्ने क्षमता दिनुभयो, जुन रोगको उपचार डाक्टरहरूसँग पनि छैन। (मत्ती ४:२३, २४; मर्कू. ५:२५-२९) हाम्रो लागि त्यो कुरा चमत्कार भए पनि यहोवाको लागि त्यो कुनै चमत्कार थिएन। हाम्रो शरीरको काम गर्ने तरिका उहाँलाई राम्ररी थाह छ। अनि शरीरमा भएको जुनसुकै खराबीलाई उहाँ सच्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँ मरेका मानिसहरूलाई पुनर्जीवित पार्न सक्नुहुन्छ र प्राकृतिक प्रकोपहरू हुनदेखि रोक्न सक्नुहुन्छ।
७. यहोवा किन सबैभन्दा बुद्धिमान्‌ हुनुहुन्छ?
७ सैतानको अधीनमा परेको यस संसारले आजसम्म पनि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय द्वन्द्वहरू रोक्ने उपायहरू खोज्दै छ। तर सारा संसारमा शान्ति ल्याउन चाहिने बुद्धि यहोवासित मात्र छ। (यशै. २:३, ४; ५४:१३) यहोवाको ज्ञान अनि बुद्धिबारे बुझ्दै जाँदा हामीले पनि पावलले जस्तै महसुस गर्न सक्नेछौं। तिनले परमेश्वरको प्रेरणा पाएर यस्तो लेखे: “परमेश्वरको सम्पत्ति, बुद्धि अनि ज्ञानको गहिराइ कत्ति अथाह छ! उहाँका न्यायहरू कत्ति अगम अनि उहाँका मार्गहरू कत्ति अपार छन्‌!”—रोमी ११:३३.
यहोवाको शासन—उत्कृष्ट शासन
८. यहोवाको शासन गर्ने तरिका तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?
८ बाइबलले यहोवासित शासन गर्ने अधिकार छ भनेर बताएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँको शासन किन उत्कृष्ट छ भनेर पनि बताएको छ। एउटा कारण हो, उहाँ प्रेमले उत्प्रेरित भएर शासन गर्नुहुन्छ। उहाँको शासन गर्ने तरिका विचार गर्दा हामी उहाँसित नजिक हुन्छौं। उहाँ “टिठाउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, रीस गर्नमा ढीलो, र कृपा र सत्यतामा प्रशस्त हुनुहुन्छ।” (प्रस्थ. ३४:६) परमेश्वर आफ्ना सेवकहरूको आदर गर्नुहुन्छ अनि तिनीहरूलाई अनमोल ठान्नुहुन्छ। हामी जति राम्ररी आफ्नो ख्याल राख्न सक्छौं, त्योभन्दा अझ राम्ररी उहाँ हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ। यहोवा आफ्ना जनहरूलाई असल कुरादेखि वञ्चित गर्नुहुन्छ भनेर सैतानले आरोप लगाएको थियो तर यो कुरा सरासर झूटो हो। किनभने हामीलाई थाह छ, हामीले अनन्त जीवन पाओस् भनेर उहाँले आफ्नो एक मात्र छोरा पनि दिनुभयो।—भजन ८४:११; रोमी ८:३२ पढ्‌नुहोस्।
९. यहोवा व्यक्तिविशेषलाई चासो देखाउनुहुन्छ भनेर कसरी थाह पाउन सक्छौं?
९ यहोवा आफ्ना जनहरूलाई समूहको रूपमा मात्र होइन, व्यक्तिविशेषको रूपमा पनि गहिरो चासो राख्नुहुन्छ। न्यायकर्ताहरूको समयमा के भएको थियो, विचार गर्नुहोस्। यहोवाले आफ्नो राष्ट्रलाई डोऱ्याउन र शत्रुहरूमाथि विजय हासिल गराउन लगभग तीन सय वर्षसम्म न्यायकर्ताहरू प्रयोग गर्नुभयो। त्यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि उहाँले एक जना गैर-इस्राएली स्त्री रूथप्रति चासो देखाउनुभयो। तिनले यहोवाको सेवा गर्न विभिन्न त्याग गरेको उहाँले याद गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई पति अनि छोरा दिनुभयो। त्यति मात्र होइन, तिनको छोराले मसीहको पुस्ता हुने सुअवसर पाएको कुरा तिनले आफू पुनर्जीवित हुँदा थाह पाउनेछिन्‌। अनि सोच्नुहोस् त, बाइबलको एउटा किताब तिनकै नाममा लेखिएको कुरा थाह पाउँदा अनि त्यसमा तिनको जीवन-कथा छ भनेर थाह पाउँदा तिनलाई कत्ति खुसी लाग्ला!—रूथ ४:१३; मत्ती १:५, १६.
१०. यहोवाको शासन गर्ने तरिका कठोर छैन, किन?
१० यहोवा कठोर र निरङ्‌कुश तरिकामा शासन गर्नुहुन्न। बरु उहाँको शासनले मानिसलाई स्वतन्त्रता र आनन्द दिन्छ। (२ कोरि. ३:१७) दाऊदले यो कुरा यसरी व्यक्त गरे: “महामहिमा र गौरवले उहाँ सुशोभित हुनुहुन्छ, सामर्थ्य र रमाहट उहाँको बासस्थानमा छन्‌।” (१ इति. १६:७, २७) त्यसैगरि भजनरचयिता एथानले यस्तो लेखे: “ती मानिसहरू धन्य हुन्‌, जसले आनन्दको स्वर चिन्छन्‌। हे परमप्रभु, तिनीहरू तपाईंको मोहोडाको प्रकाशमा हिंड्‌छन्‌। तिनीहरू दिनभरि तपाईंकै नाउँमा रमाउँछन्‌, र तिनीहरू तपाईंकै धार्मिकतामा उच्च पारिन्छन्‌।”—भज. ८९:१५, १६.
११. यहोवा उत्कृष्ट शासक हुनुहुन्छ भनेर किन विश्वस्त हुन सक्छौं?
११ यहोवाको भलाइका कामहरूमा जति मनन गर्छौं, उहाँ उत्कृष्ट शासक हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यति नै विश्वस्त हुन्छौं। अनि भजनरचयिताले जस्तै यस्तो महसुस गर्छौं: “तपाईंको दरवारमा एक दिन हजार दिनभन्दा असल छ।” (भज. ८४:१०) यहोवा हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई हाम्रो बनौट थाह छ। त्यसैले केले साँचो आनन्द दिन्छ भनेर उहाँलाई राम्ररी थाह छ अनि उहाँ त्यो कुरा हामीलाई दिनुहुन्छ। यहोवाले हाम्रो लागि विभिन्न स्तर तोक्नुभएको छ। ती स्तरअनुसार चल्न कहिलेकाहीं केही त्याग गर्नुपर्ने हुन सक्छ तर ती हाम्रै फाइदाका लागि हुन्‌ अनि त्यसले अपार आनन्द दिन्छ।—यशैया ४८:१७ पढ्‌नुहोस्।
१२. हामीले यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्नुको मुख्य कारण के हो?
१२ ख्रीष्टको हजार वर्षीय शासन सकेपछि केही मानिसले यहोवाको सार्वभौमिकताको विरोध गर्नेछन्‌ भनेर बाइबलले सङ्‌केत गर्छ। (प्रका. २०:७, ८) केले तिनीहरूलाई त्यसो गर्न उक्साउनेछ? दियाबल कैदबाट मुक्त भएपछि मानिसहरूको मनमा स्वार्थी इच्छा जगाउन खोज्नेछ। त्यसले सधैं गर्ने नै त्यही हो। परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरे पनि सधैंभरि बाँच्न सकिन्छ भनेर सैतानले मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउन खोज्नेछ। त्यसको यो दाबी कहिल्यै वास्तविकतामा परिणत हुनेछैन। हामीले आफैलाई यस्तो प्रश्न सोध्नुपर्छ: ‘के म सैतानको बहकाउमा पर्नेछु?’ यदि हामी यहोवा भला हुनुहुन्छ र उहाँसित मात्र शासन गर्ने अधिकार छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं अनि उहाँलाई साँच्चै माया गर्छौं भने दियाबलका दाबीहरू हामीलाई बकबास लाग्नेछ। हामी न्यायी अनि मायालु परमेश्वर यहोवाको शासनमा मात्र जीवन बिताउन चाहन्छौं।
वफादार भई यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्नुहोस्
१३. हामी कुन तरिकामा यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्न सक्छौं?
१३ यहोवासित शासन गर्ने अधिकार छ र उहाँको शासन गर्ने तरिका उत्कृष्ट छ भनेर हामीले बुझ्यौं। त्यसैले हामीले तनमनले यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्नुपर्छ। आफ्नो सत्यनिष्ठा कायम राखेर अनि वफादार हुँदै उहाँको सेवा गरेर उहाँको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्न सक्छौं। अरू कुन तरिकामा यसो गर्न सक्छौं? यहोवाको कामकुरा गर्ने तरिका अनुकरण गरेर। यसो गऱ्यौं भने हामी उहाँको शासन चाहन्छौं अनि त्यसलाई समर्थन गर्छौं भनेर देखाइरहेका हुन्छौं।—एफिसी ५:१, २ पढ्‌नुहोस्।
१४. एल्डर अनि परिवारको शिरले कसरी यहोवाको अनुकरण गर्न सक्छन्‌?
१४ हामीले बाइबलबाट थाह पायौं, यहोवा आफ्नो अख्तियार सधैं मायालु तरिकामा प्रयोग गर्नुहुन्छ। यहोवाको सार्वभौमिकतालाई प्रेम गर्ने परिवारको शिर अनि मण्डलीको एल्डर पनि उहाँको अनुकरण गर्छन्‌। तिनीहरू आफ्नो अख्तियार अरूमाथि हैकम जमाउन प्रयोग गर्दैनन्‌। पावलले पनि यहोवा अनि उहाँको छोराको अनुकरण गरे। (१ कोरि. ११:१) सही कुरा गर्न तिनले अरूलाई अप्ठ्‌यारोमा पार्ने वा दबाब दिने कहिल्यै गरेनन्‌। बरु दयालु हुँदै सही कुरा गर्न आग्रह गरे। (रोमी १२:१; एफि. ४:१; फिले. ८-१०) यसरी पावलले यहोवाको अनुकरण गरे। यहोवाको सार्वभौमिकतालाई प्रेम गर्ने अनि समर्थन गर्ने सबैले पनि त्यसै गर्नुपर्छ।
१५. यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको देखाउने एउटा तरिका के हो?
१५ शिरत्वको प्रबन्धप्रति हामीले कस्तो मनोवृत्ति राख्नुपर्छ? यहोवाले अख्तियार दिनुभएका व्यक्तिहरूको अधीनमा बसेर हामी उहाँको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको देखाउँछौं। कुनै-कुनै निर्णय गरिनुको कारण राम्ररी नबुझ्दा वा त्यो निर्णय चित्त नबुझ्दा समेत हामी यहोवाको प्रबन्धलाई समर्थन गर्न चाहन्छौं। संसारका मानिसहरू अख्तियारको विरोध गर्छन्‌ तर यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्नेहरू भने अख्तियारको अधीनमा बस्छन्‌। (एफि. ५:२२, २३; ६:१-३; हिब्रू १३:१७) यसरी अधीनमा बस्दा हाम्रै भलाइ हुन्छ किनभने यहोवा हामीलाई असल कुरा दिन चाहनुहुन्छ।
१६. यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्नेहरू कसरी व्यक्तिगत निर्णय गर्छन्‌?
१६ व्यक्तिगत निर्णय गर्नुपर्दा पनि यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको देखाउन सक्छौं। यहोवा हरेक परिस्थितिको लागि एक-एक नियम दिनुहुन्न। बरु उहाँको विचार बुझ्न मदत गरेर हामीलाई डोऱ्याउनुहुन्छ। एउटा उदाहरण विचार गरौं। हाम्रो पहिरन अनि कोरीबाटी कस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँले लामो सूची दिनुभएको छैन। तर हाम्रो पहिरन अनि कोरीबाटी शालीनता झल्कने अनि ख्रीष्टियनहरूलाई सुहाउने किसिमको हुनुपर्छ भनेर बताउनुभएको छ। (१ तिमो. २:९, १०) साथै हाम्रो निर्णयले अरूलाई ठेस पुऱ्याउन सक्छ भन्ने कुरामा हामीले विचार गरेको पनि उहाँ चाहनुहुन्छ। (१ कोरि. १०:३१-३३) जीवनको हरेक क्षेत्रमा व्यक्तिगत रुचिलाई भन्दा यहोवाको इच्छालाई प्रथम स्थान दियौं भने उहाँको शासन गर्ने तरिकालाई प्रेम र समर्थन गर्छौं भनेर देखाइरहेका हुन्छौं।
निर्णय गर्नुपर्दा र पारिवारिक समस्या आइपर्दा यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको देखाउनुहोस् (अनुच्छेद १६-१८ हेर्नुहोस्)
१७, १८. ख्रीष्टियन दम्पतीले कुन-कुन तरिकामा यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको देखाउन सक्छन्‌?
१७ ख्रीष्टियन दम्पतीहरूले यहोवाको कामकुरा गर्ने तरिका र सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको देखाउन सक्ने एउटा क्षेत्र विचार गरौं। वैवाहिक जीवन आफूले सोचेजस्तो नहुँदा अनि गम्भीर समस्याहरू आउँदा के गर्न सक्छौं? यस्तो बेला यहोवाले इस्राएल राष्ट्रसित गर्नुभएको व्यवहारबारे मनन गर्दा मदत पाउन सक्छौं। बाइबलमा यहोवालाई इस्राएल राष्ट्रको पतिको रूपमा चित्रण गरिएको छ। (यशै. ५४:५; ६२:४) तर पत्नी अर्थात्‌ इस्राएलीहरूले पटक-पटक उहाँलाई दुःखी तुल्याए। तैपनि यहोवाले तिनीहरूलाई माया गर्न छोड्‌नुभएन। तिनीहरूसित गर्नुभएको करारको आधारमा उहाँले तिनीहरूलाई पटक-पटक क्षमा दिइरहनुभयो। (भजन १०६:४३-४५ पढ्‌नुहोस्) यहोवाको यस्तो अटल प्रेम देख्दा के हामी उहाँसित अझै नजिक हुँदैनौं र?
१८ त्यस्तैगरि यहोवाको कामकुरा गर्ने तरिकालाई प्रेम गर्ने दम्पती उहाँको अनुकरण गर्छन्‌। वैवाहिक जीवनमा कुनै समस्या आउँदा तिनीहरू सम्बन्धविच्छेद गर्न गैर-धर्मशास्त्रीय आधार खोज्दैनन्‌। यहोवाले पति-पत्नीलाई एकसाथ जोड्‌नुभएको छ र सधैंभरि सँगै ‘बसेको’ उहाँ चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझेका छन्‌। सम्बन्धविच्छेद अनि पुनर्विवाह गर्न पाउने एक मात्र धर्मशास्त्रीय आधार भनेको अवैध-यौनसम्बन्ध हो। (मत्ती १९:५, ६, ९) बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न सकेजति कोसिस गरेर तिनीहरू यहोवाको शासन गर्ने तरिकालाई प्रेम गरेको देखाउँछन्‌।
१९. यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्नदेखि चुक्यौं भने के गर्नुपर्छ?
१९ त्रुटिपूर्ण भएकोले हामी कहिलेकाहीं यहोवालाई दुःखी बनाउने कामकुरा गर्छौं। यो कुरा यहोवालाई थाह भएकोले उहाँले फिरौतीको बलिदानको प्रबन्ध गर्नुभयो। त्यसैले कुनै पाप गर्न पुग्दा हामीले यहोवासित क्षमा माग्नुपर्छ। (१ यूह. २:१, २) दोषी महसुस गरेर बस्नुको सट्टा हामीले गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ। यहोवासित नजिक भइरह्यौं भने उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ अनि आध्यात्मिक रूपमा निको हुन मदत गर्नुहुन्छ। साथै भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको गल्ती गर्नदेखि जोगिन पनि मदत गर्नुहुन्छ।—भज. १०३:३.
२०. यहोवाको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्ने समय अहिल्यै हो, किन?
२० नयाँ संसारमा सबै मानिस यहोवाको शासनको अधीनमा बस्नेछन्‌ अनि उहाँले तोक्नुभएका स्तरहरू सिक्नेछन्‌। (यशै. ११:९) तर हामीले अहिले नै ती स्तरहरू सिक्न पाएका छौं। अब चाँडै यहोवाको सार्वभौमिकताको विवाद सुल्झनेछ। त्यसैले आफ्नो सत्यनिष्ठा कायम राखेर, यहोवाको सेवा गरेर अनि जीवनको हरेक पक्षमा उहाँको अनुकरण गर्न सक्दो गरेर उहाँको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको देखाउने समय अहिल्यै हो।